Wijetị Iwu, Nkwado na Salestụ Ahịa | Martech Zone
Wijetị Legalities, Nkwado na Ahịa Tax
Wenezdee, Jenụwarị 17, 2007 Wenezdee, Jenụwarị 17, 2007 Douglas Karr
Ajuju juru ajuju maka ndi na-ewu wijetị na ulo oru ndi weputara ngwa agha:
Kedu ụgwọ dị, ma ọ bụrụ na ọ dị, iji nye wijetị maka ngwa gị? Ngwa wijetị ọ kwesịrị? Ngwa wijetị dị arụ? Ha abụọ?
You na-akwado wijetị dị ka a ga-asị na ha bụ akụkụ nke ngwa gị? Ka ha 'na-eji ya na ihe egwu gị?'
Ọ bụrụ na ị bụ onye SaaS ụlọ ọrụ ebe ọ na - enweghị nbudata ma ọ bụ wụnye ngwanrọ ọ bụla, olee otu ị ga esi ejikwa ụtụ isi ire ahịa na Wijetị? Ọ bụghị wijetị, n’ezie, otu ngwanrọ ị na-ekesa? Kedu ihe bụ ụtụ isi nke nke ahụ?
M na-arịọ maka na a dụrụ anyị ọdụ na akwụkwọ, mgbasa ozi, ma ọ bụ sọftụwia ọ bụla anyị na-ekesa nwere ike ịmetụta ọrụ, nkwado na ụtụ isi nke ụlọ ọrụ anyị. Enwere ọrụ ma ọ bụ ahịrịokwu na-ewepu ihe dịka wijetị?
Nke a dị mkpa karịsịa ka ngwa ịntanetị na-adịwanye ike. Nghọta m banyere Apollo bụ na ọ nwere ike ịgba ọsọ dị ka ngwa na mpụga nke ihe nchọgharị, mana iji teknụzụ ihe nchọgharị. Gịnị bụ ihe nke ahụ pụtara?
Biko zigara ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ọ bụla otu ị nwere ike. Daalụ!
Gbalịa onye edemede nke blog a http://www.micropersuasion.com/.
Ọ nwere ike ịma ihe.
Raise na-ewelite ajụjụ ndị dabara adaba.
Ngwaọrụ bụ mgbatị nke akara ụlọ ọrụ na mpụga ụlọ ọrụ ma ọ bụ nke 'onye nnọchi anya' maka ụlọ ọrụ na ibe weebụ na desktọọpụ.
Dị ka ndị dị otú a, ọ dị mkpa ịghọta ihe dị na iji wijetị dị ka ngwa ngwa na ngwa ahịa.
Ekwenyere m na wijetị na-eburu otu ibu ọrụ maka ụlọ ọrụ dịka ndepụta RSS ya. Njirimara onye ọrụ ejiri mee ihe iji gosipụta ọdịnaya dị mkpa karịa ọdịnaya ahụ. Ya mere, gbaa mbọ hụ na ọdịnaya gị dabara adaba.
Ngwaọrụ Desktọpụ ka ekwesiri iji nlezianya kpachara anya ka ha dị ike karịa ma nweta kọmpụta onye ọrụ ozugbo. Yabụ ee, were ha dị ka sọftụwia ị na-ekesa.
Na MuseStorm anyị na-agbasi mbọ ike iji QA anyị wijetị ma na-emeso ha dịka sọftụwia ọ bụla ọzọ. Ekwenyesiri m ike na ndị ọzọ na-ere wijetị na-eme otu ihe ahụ.
Jenụwarị 23, 2007 na 6:46 PM
Daalụ maka nzaghachi onwe, Ori!
Azịza gị yiri ka ọ na-akwado na ọ nwere ọdịnaya abụọ na software n'ihi na m chere na anyị ga-agakwuru ya n'ụzọ a. You ma ma ọ bụrụ na ndị ahịa gị na-akwụ ụtụ ahịa maka wijetị a na-ekesa - ọbụlagodi na ha nweere onwe ha ibudata?